Full Solutions idozi All Your iOS 9 Nsogbu / Njehie
1.1 Akụkụ & ụdịdị
1.4 Ụbọchị mwepụta
1.6 Nzuzo na iPhone 7 / 6s
1.7 iPhone 7 ma ọ bụ iPhone 6s?
2 iPhone 7 / 6s Atụmatụ
2.1 Nọgidenụ iPhone 7 / 6s Fast
2.2 Naghachi Photo na Notes
Ma gụọ 2.3 iPhone 7 / 7s Data Recovery
2.5 Naghachi Video na Notes
2.6 Nyefee Data ka iPhone 7 / 6s
3.1 Nzuzo banyere iOS 9
3.2 iOS 9 ndụ batrị
3.3 iOS 9 Track mmekọahụ
3.4 iOS 9 amamiihe Atụmatụ
3.5 Gaghị Wụnye iOS 9 Beta
3.6 Jailebreak Tweaks gburu iOS 9
3.7 iOS 9 akwụkwọ ahụ aja
3.9 iOS 9 chinchi
3,10 iOS 9 Nsogbu
4. iOS 9 Atụmatụ
4.1 Guide to Download & Wụnye iOS 9
4.2 Guide maka jailbroken iPhone ka iOS 9
4.3 Update ka iOS 9
4.5 Bricked iPhone mgbe iOS 9 Update
4.6 White Apple Logo mgbe iOS 9 Update
4.8 Free elu iOS 9 Space
4.9 iOS 9 Ngwaọrụ Iweghachite
4,10 Nyefee gaa na iOS 9
iOS Fans bụ chọsiri ike ha aka na nke ukwuu na-echere ọhụrụ femụwe update si Apple, otu n'ime ndị kasị asọpụrụ mobile ụlọ ọrụ nke ụwa, ee; anyị na-ekwu okwu banyere nnukwu mmelite nke iOS 9. Ma, inye a uto nke ọhụrụ ha iOS, Apple dị ka mgbe niile mbo ihu na-enye a beta version maka download site na-eduga mmepe niile gafee ụwa.
Otú ọ dị, n'ihi na 1st oge na akụkọ ihe mere eme nke ụlọ ọrụ; ha kpebiri ẹkedori a ọha beta version nke iOS 9 dị ka mma. Ya mere, onye ọ bụla ka m na gị nwekwara ike ibudata na iOS 9 beta version na ha iOS ngwaọrụ ma na-a uto nke ihe iOS 9 na-aga ịbụ ka.
Anyị pụrụ ịmata ji anya ihe ọ bụ ihe niile banyere. N'ezie, ụlọ ọrụ na-atụ anya na-achọta ọtụtụ chinchi site na nke a beta version na ikpeazụ iOS na ga-oru ụfọdụ mgbe e mesịrị na afọ ga-abụ nke na-atụ anya maka. Ma, ọtụtụ iOS ọrụ ugbua ebudatara iOS beta ha na ngwaọrụ na amalitela chọta mbipụta, nsogbu ma ọ bụ njehie.
Ọ bụrụ na ị na-eche echiche nke na-agbalị si iOS 9 na-eche kwesịrị ị na-eruda ma ọ bụ, ebe a anyị bụ na ndị niile na mbipụta na e kwuru na ndị ha na ha yikarịrị ngwọta dị ka nke ọma mere na ọ bụrụ na ị họrọ, ị nwere ike ịga n'ihu ma na-agbalị si iOS 9 na-enweghị ọsụsọ na-agba ya.
Nsogbu 1: ide proactive ihuenyo on iOS 9
iOS 9 abịa na a proactive ihuenyo na-anọdụ n'aka-ekpe n'akụkụ gị n'ụlọ ihuenyo. Ọ bụ oké mma Otú ọ dị ọtụtụ ndị ọrụ chọtara ya na-efu mgbe swiped si.
Otú ndozi a nke
Gaa na Ntọala> Ozuruọnụ> Chakwasa ihie Search> ka ọ 'Off' na mgbe ahụ Malitegharịa ekwentị gị iOS ngwaọrụ. Ozugbo iOS ngwaọrụ nwere restarted, na-agbalị ịmafe on a mma ọzọ na na kwesịrị dozie ide ihuenyo nke.
Nsogbu 2:-apụghị ịgbanwee si WiFi ka Cellular njikọ
Ọ bụghị ịmafe si WiFi ka Cellular mode nke njikọ na-akpaghị aka bụ ihe ọzọ nke na a hụrụ ọtụtụ iOS 9 ọrụ. Nke a bụ ihe irritant karịsịa mgbe ị na ka na-ekwu, na-ahapụ n'ụlọ ọrụ ma ọ bụ Anglịkan na yiri ka unu nwere fọrọ nke nta furu efu njikọ.
Mbụ, na-agbalị na-anwale usoro nke toggling na gbanyụọ ụgbọelu na ọnọdụ, ma ọ bụrụ nke na-adịghị arụ ọrụ ahụ na-agbalị aga Ntọala> Cellular> Cellular Data> ka ọ 'Off' tupu mbịne ọ 'On' mgbe ọ cheere 3-5 sekọnd.
Nsogbu 3: Mpịakọta rocker ghara ikwe ka pịa foto dị na mbụ
Otu nke ukwuu mmasị atụmatụ nke iOS ngwaọrụ kemgbe ike nke ịpị foto na iji olu button Otú ọ dị a otutu ọrụ nwere mkpesa banyere nke a adịghị arụ ọrụ na iOS 9. Nke a Otú ọ dị bụ a mara nke na Apple na-arụ ọrụ na ya.
N'ihi na ugbu a, nanị fix na-esote bụ update si Apple n'ihi na nke anyị ga-echere ruo mgbe mbubreyo afọ a.
Nsogbu 4: Mgbada n'usoro ndụ batrị ebe ọ bụ na update
Ugbu a, a otutu iOS 9 ọrụ ahụwo ha ndụ batrị mezuo mgbe update. Ọtụtụ ndị azọrọwo na batrị ka malitere igbapu kwa ngwa ngwa.
Na mbụ, na-aga Ntọala> Ozuruọnụ> ojiji> Battery ojiji iji chepụta ma batrị nke a na-mere site a akpan akpan ngwa ma ọ bụ. Ị nwere ike wee hichapụ na reinstall na ngwa na ajụjụ ahụ ma ọ bụrụ na fixes nke. Dị ka a sekọndrị nhọrọ, ma ọ bụrụ na Ịmalitegharịa iOS ngwaọrụ adịghị arụ ọrụ, na-aga Ntọala> Ozuruọnụ> nrụpụta> Tọgharịa nile Ntọala na Tinye paswọọdụ gị iji tọgharịa gị iOS ngwaọrụ.
Nsogbu 5: mgbe disconnections nke WiFi netwọk
Anyị na-hụrụ ole na ole ọrụ chere ihu mbipụta na WiFi ịlụ mgbagwoju ugboro ugboro ma ọ bụ na njikọ mgbe nile na ihe ọ bụla nke na netwọk.
Gaa na Ntọala> Ozuruọnụ> nrụpụta> Tọgharịa Network Ntọala na-ehichapụ netwọk gị ntọala dị ọcha na-amalite na afresh. I nwere ike na-agbalị aga Ntọala> WiFi> WiFi aha> enweta na Echefu a Network.
Nsogbu 6: Ọnọdụ Ogwe mbipụta
� Nke a bụ otu n'ime mbipụta ọrụ e chere ihu na iOS 9 update ebe na ahụ ọkwa-ewe kwa ogologo pụọ mgbe ị na-emeghe na ngwa.
Gaa na Ntọala> Ozuruọnụ> nrụpụta> Tọgharịa nile Ntọala. Nke ahụ kwesịrị idozi issue.r.
Nsogbu 7: Ịnọgide iTunes ịrịba ama na arịrịọ popup
Otu n'ime mbipụta a otutu ọrụ kọrọ bụ eziokwu na ha iOS ngwaọrụ mgbe niile jụrụ ihe ịrịba ama na iTunes. Ọ bụrụ na nke a nke na-cropping elu, ị ga-eji na-esonụ fix.
Gaa na Ntọala> Touch ID & passcode> iTunes & App Store> Gbanyụọ. Ọ bụrụ na nke na-eme ọzọ, Nanị na-eso n'elu nzọụkwụ ọzọ, nanị na nke a oge ka ọ 'On' kama. Toggling n'etiti 'Off' na 'On' bụ nanị nhọrọ maka ugbu a.
Nsogbu 8: Njọ oge ịbụ egosipụta na iOS 9
Obere nke Otú ọ dị ka ihe irritant, ọrụ achọpụtala na biputere iOS 9 update, ha ngwaọrụ kwụsịrị egosipụta oge mkpa ka ha na ọnọdụ.
Gaa na Ntọala> Ozuruọnụ> Ụbọchị & Oge> Mee akpaghị aka> Gbanyụọ.
Nsogbu 9: iOS ngwaọrụ adịghị ahụ iOS 9 update
Ụfọdụ ọrụ achọpụtala na ha iOS ngwaọrụ adịghị ahụ iOS 9 update na iji dozie a nke, ị nwere ike na-re-wụnye profaịlụ na gị iOS ngwaọrụ.
Ị nwere ike ikwugharị usoro nke nkwalite site na ịga na beta.apple.com/profile~~V na mgbe ahụ na ịpị on Download Profaịlụ nhọrọ. Ozugbo download dị n'elu, họrọ nhọrọ nke Wụnye. Malitegharịa ekwentị gị iOS ngwaọrụ ugbu a na-aga Ntọala> Ozuruọnụ> Software Update na ị ga-enwe ike ịhụ ndị iOS 9 download.
DFU Mode: Olee otú Tinye na wepuÚ DFU ọnọdụ nke Your iOS Ngwaọrụ
Facebook App Nsogbu on iPhone: Idozi Ha na sekọnd
3 iPhone Explorer égwu
Nkuzi: Nyefee Music site na mpụga ike mbanye ka iPhone
Olee otú ndabere ma ọ bụ Export WhatsApp Ozi si iPhone
Olee otú Zọpụta Pictures si iMessage ka a Computer
Olee otú Wepụ Notes si iPhone ndabere na Mac
Olee otú undelete iPhone ndabere faịlụ
> Resource> iPhone> Full Solutions idozi All Your iOS 9 Nsogbu / Njehie